PCB any China manenjana, marefo matevina, PCB mavesatra, PCB mavesatra-saro-bidy
Description:PCB matevina-marefo,Rb-Rense-Flex PCB,Green Rigid-Flex PCB,Solosaina Rigid-Flex PCB,,
Home > Products > PCB matevina
Ny vokatra avy amin'ny PCB matevina , mpanofana manokana avy any Shina, PCB matevina-marefo , Rb-Rense-Flex PCB mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Green Rigid-Flex PCB R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
Lapana haingana 4 sosona Rigid-flex PCB  Contact Now
4 sosona malefaka PC flex board  Contact Now
4 fametahana matevina fanoratana matevina matevina 4 sosona  Contact Now
8 sosona flexive sy malefaka-flex pcb  Contact Now
PC boribory matevana 8 sosona marefo PCB  Contact Now
matevina fehikibo matevina pcb  Contact Now
matevina modely pb-matevina pdf  Contact Now
famaritana famaritana pcb malefaka mafy  Contact Now
matevina modely fanamainty-flexbbb  Contact Now
Fitsipika endrika famolavolana pcb masiaka  Contact Now
8 sosona haingana matevina marefo pcb  Contact Now
4 sarany sosona matevina vita amin'ny malefaka pcb  Contact Now
4 sosona matevina matevina amam-bolo matevina  Contact Now
matevina milay mikapoka gerb rap  Contact Now
4 sosona matevina fananganana marefo matevina  Contact Now
8 sosona matevina marefo marefo marefo marefo 8b  Contact Now
4 sosona matevina marefo PCb matevina  Contact Now
mpitari-dalana fitarihana pcb mutilayer rigid-flex  Contact Now
6 sosona matevina- fanodinana pcb famoronana  Contact Now
4 sosona matevina sarisary matevina matevina matevina 4 sosona  Contact Now
2 sosona endrika matevina marefo marefo marefo  Contact Now
Drafitra circuit pirinty vita pirinty mafy fo (PCB) dia famolavolana board misy boribory izay mampiditra ireo singa amin'ny hardboard sy ireo boribory mora ampiasaina. Ny PCB marefo matevina dia matevina amin'ny teboka sasany eo amin'ny...
PCB 4 matevina vita amin'ny lamba kely 4 namboarin'ny Storm Circuit andro vitsy lasa izay. Biraim-paritra vita pirinty Rigid-Flex dia tabilao PCB mampiasa tambazotra maoderina sy teknolojia board.Many mpamorona PCB rehetra tsy mahalala ny...
Ny PCB matevina dia afaka mampihena ny halaviran-jotra misy elanelana ary ny hafainganam-pandeha dia afaka manatsara tsara ny fahatokisana.Ny fampitana famantarana mahazatra amin'ny alàlan'ny mpampitambatra dia [PCB board → konektor → flex...
Ho an'ny famolavolana PCB matevina mafy, ny fantsom-pivarotana pcb faritra dia tokony hiditra sy mivoaka tsara araka izay azo atao. Raha voafetra ny rafi-pandrefesana sy mafy orina, Ampiasao araka izay tratra araka izay azo atao ny famindrana...
Ny PCB matevina dia karazana pirinty vita pirinty vaovao miaraka amin'ny faharetan'ny PCB matevina sy ny fampifanarahana PCB haingam-pandeha. Amin'ny karazana PCB rehetra, ny PCB matevina dia marefo amin'ny tontolon'ny...
Betsaka ny dingan'ny famokarana ho an'ny birao matevina-dfindra, sarotra ny famokarana, ambany ny vokatra ary misy ny fitaovana miditra sy ny herin'olombelona. Noho izany, ny vidiny dia lafo kokoa ary ny fotoana famokarana dia lava kokoa...
Ny fampiasana takelaka matevina dia mampihena ny isan'ny lehilahy ho an'ny SMT, satria mihena ny isan'ny mpampita. Mampihena koa ny adiny mandritra ny ora fivarotana ilay milina manontolo, satria tsy esorina ny hetsika fanangonana...
famaritana famaritana pcb malefaka mafy
Amin'ny ankapobeny, ny làlan-tsofina amin'ny tabilao PCB dia vita amin'ny varahina, ary ny faran'ny fifandraisana amin'ny mpampita dia vita amin'ny volamena, ary ny fantsom-pivarotana dia tsy maintsy amidy amin'ny birao...
Ny solosaina marefo marefo PCB Afaka mamonjy toerana amin'ny fomba mahomby amin'ny alàlan'ny board circuit ary manafoana ny fizotran'ny fampiasana konektor na Hot Bar.Fa natambatra ny zana-tsipika miorim-batana, ny habaka izay nitaky...
Ny birao PCB matevina dia board board misy pirinty izay misy faritra iray na mavesatra kokoa sy faritra iray na mora kokoa amin'ny birao vita pirinty. PCB manasongadina: 1.Layer: 6 sosona matevina + 2 layer flex 2.Material: FR4 + Polyimide...
8 sosona haingana matevina marefo pcb
Ho an'ny fampiasana tabilao PCB matevina sy marefo amin'ny fiara, misy bokotra matetika ampiasaina eo amin'ilay kodiarana mampifandray ny motherboard, fifandraisana amin'ny alàlan'ny efijery fandaharan-tsarin'ny fiara sy ny...
4 sarany sosona matevina vita amin'ny malefaka pcb
Elektronika ho an'ny mpanjifa - DSC sy DV dia solontenan'ny fivoaran'ny kitay PCB matevina amin'ny vokatra elektronika mpanjifa, izay azo zaraina ho famaky roa amin'ny fampisehoana sy ny firafitra. Raha resaka fahana, ny takelaka...
Amin'ny fampiharana ireo tabilao matevina sy malefaka amin'ny finday, dia matetika no mametaka ny finday Hinge, module camera, keypad ary RF module. PCB manasongadina: 1.Layer: 6 sosona matevina + 2 layer flex 2.Material: FR4 + Polyimide...
matevina milay mikapoka gerb rap
Ny fampiasana Industrizika-mapi-haingam-pandeha PCB dia misy birao mahay sy matevina amin'ny fampiasana indostria, miaramila sy fitsaboana. Ny ankamaroan'ny faritra indostria dia mila marika, fiarovana, ary tsy marefo tany, noho izany ny...
4 sosona matevina fananganana marefo matevina
Ho an'ny PC Rigid-flex. Noho ny fetran'ny toerana na ny zoro miondrika, ny volavola dia azo atao miaraka amin'ny faritra savaivoka mivezivezy ao anaty birao ahafahana ny fihanaky ny radio sy ny fangatahana eny amin'ny habakabaka....
8 sosona matevina marefo marefo marefo marefo 8b
Ho an'ny tabilao PCB matevina marobe 8 matevina, ambony / ambany dia samy manaova taratasy tokana, 2/3, 4/5, 6 / 7each kapila tokana, ny laharam-pahamehan'ny takelaka haingam-pandeha dia 4/5> 2/3 = 6/7. PCB manasongadina: 1.Layer:...
Ny tabilao PCB haingam-pandeha sy ny zana-tsipika PCB matevina miaraka amina tsipika dia natambatra amin'ny alàlan'ny fitambatra manokana hahatratrarana vokatra vokatra iray. Ny afovoany amin'ny ankapobeny dia tsy miankina amin'ny...
Ny biraon'ny PCB matevina dia tsy tabilao fahita matetika. Mampifangaro habe manify marefo marefo sy matevina ary manalamina azy amin'ny singa tokana. Ny fizotran'ny fehikibo vita amin'ny endrika pcb malefaka dia mitondra fanamby sy...
Ny biraon'ny PCB matezika mafy dia afaka mampihena ny halaviran'ny fifindran'ny marika ary mampitombo ny hafainganam-pandeha, izay mety hanatsara ny fahombiazana azo antoka. Afaka manome ny vidiny tsara indrindra ho an'ny malefaka...
4 sosona matevina sarisary matevina matevina matevina 4 sosona
Ny biraom-pifandraisana hentitra dia samy manana ny mampiavaka ny FPC sy ny mampiavaka ny PCB. Noho izany, azo ampiasaina amin'ny vokatra sasany misy fepetra takiana manokana, ny faritra iray azo ampiharina sy ny faritra hentitra sasany, izay...
Shina PCB matevina mpamatsy
Inona ny atao hoe PC Rigid Flex PCB?
Biraon'ny fizaram-paritra vita printy matevina dia tabilao mampiasa teknolojia lozisialy mora sy henjana amin'ny fampiharana iray. Ny ankabeazan'ireo takelaka boribory matevina dia ahitana takelaka marobe manitsy ny takelaka mifono amin'ny tabilao na matevina ivelany na / na anatiny, miankina amin'ny famolavolana ny fampiharana. Ny sangan'asa haingam-pandeha dia natao mba tsy ho ao amin'ny fanjakana tsy an-kijanona ary matetika miforona amin'ny curve flexed mandritra ny famokarana na ny fametrahana.
Ny famolavolana matevina matevina dia sarotra kokoa noho ny famolavolana tontolo iainana mahazatra mahazatra, satria ireo takelaka ireo dia namboarina tamin'ny habaka 3D, izay manome fahombiazana lehibe kokoa amin'ny habakabaka koa. Amin'ny alàlan'ny famolavolana ny endrika famolavolana marefo telo refy dia afaka manodina, mamoritra ary manodina ireo làlan-tsofina malemy azo ahatratrarana ny endrika tadiaviny amin'ny fonosana fangatahana farany.
Singa maro kokoa amin'ny efitrano kely kokoa
Fanatsarana ny kalitao tsara sy ny fahamarinany
Tena azo itokisana amin'ny tontolo henjana
Mampihena ny vidin-rafitra
Mihena ny lanjany
Ny manam-pahaizana momba ny - tombony!
Tsy heverina ho zavatra fotsiny hitazona ny singa hafa ny board circuit. Raha ny marina dia ampahany amin'ny rafitra io ary manolotra karazana safidy samihafa hampidirana ireo fiasa samihafa. Te hanohana ny mpanjifantsika aloha vao manomboka amin'ny fizotran'ny fampandrosoana mba hahafahan'izy ireo hahatratra ny ambaratonga be dia be anay. Amin'ity fomba ity dia afaka mahomby isika amin'ny fitadiavana ny vahaolana tonga lafatra ho an'ny toe-javatra manokana raha toa ka mitazona ny fomba fijerin'ny rafitra iray manontolo.
PCB matevina-marefo Rb-Rense-Flex PCB Green Rigid-Flex PCB Solosaina Rigid-Flex PCB 4 PC Layer matevina-marefo